Fifaninanana andriambavilanitra :: Voahosotra ho “Miss Madagascar 2020” i Anjaratiana Nellie • AoRaha
Fifaninanana andriambavilanitra Voahosotra ho “Miss Madagascar 2020” i Anjaratiana Nellie
Tovovavy, 24 taona, Anjaratiana Nellie, nisolo tena ireo mpifaninana malagasy avy any ampitan-dranomasina na « Miss Diaspora » no nandrombaka ny anaram-boninahitra « Miss Madagascar 2020 ». Navoakan’ireo mpikarakara sy mpitsara teo amin’ ny pejy Facebook « Miss Madagascar Ofisialy-CNMM », tamin’ny zoma alina lasa teo, ny vokatr’ity fifaninanana hatsaran-tarehy amambika ho an’ny andriambavilanitra ity.
Tontosa soa aman-tsara ny « Miss Madagascar » 2020 na teo aza ny toe-draharaha ara-pahasalamana ankehitriny. Santionany amin’ireo mason-tsivana nahitan’i Anjaratiana Nellie fahombiazana ny fananany hatsaran-tarehy amam-bika. Fanontaniana efatra mitovitovy tamin’ny fifaninanana « Miss Monde », no napetraka tamin’ ireo tovovavy tafakatra tamin’ny dingana famaranana. Notombanana avokoa ny ventinkevitra ananany, ny fomba fiteny, ny fahaizana ny teny vahiny ary ny fahaizana mamaly fanontaniana. Efa omanina amin’ireo fifaninanana maneran-tany samihafa rahateo ireo mpandray anjara.
Ny Miss Ihorombe kosa no laharana faharoa (1ère dauphine), ary ny miss Diana no laharana fahatelo (2ème dauphine). Ny « Miss Analamanga » indray no nandrombaka amboara betsaka indrindra satria sady lany ho mpanjakan’ny hatsarana no nahazo ny “trophée j’aime et partage”, ny “trophée photogénique” ary ny “trophée multi- media”. Ny « Miss Betsiboka » no manaitra indrindra an’reo mpitsara, ka nahazo ny “Coup de coeur” tamin’izao andiany ho an’ny taona 2020 izao.
Paikady amin’ny valanaretina :: Voairaka hijery ny zava-misy isam-paritra ireo minisitra
Fiarovana mpanjifa :: Manamafy ny fepetra fisorohana rehetra ny Jirama